Manuel Altolaguirre naEmilio Prados. Vamwe vadetembi ve 27 | Zvazvino Zvinyorwa
Miguel Altolaguirre naEmilio Prados
Manuel Altolaguirre naEmilio Prados paive nevanyanduri vaviri unorue ndezvaJehovha Chizvarwa che27. Yakafukidzwa nevamwe vatinoshanda navo kubva kune iwo mashoma ma genus akaigadzira, mhando yayo hainawo kupokana. Nhasi ndinovarangarira uye ndinovatsigira nenhetembo nhanhatu.
1.1 3 nhetembo
2.1 3 nhetembo
Akazvarwa muMalaga muna 1905, asati asvika makore makumi maviri akatanga yake yekutanga magazini yenhetembo imomo maive nekubatana kwevanyanduri vanozivikanwa uye nevamwe vaaishanda navo muchizvarwa chake. Akaenda kuFrance neEngland, kwaakatanga muchina wake wekudhinda.
Paakadzokera kuSpain akasara neRepublic panguva yehondo yevagari vemo uye pakupera kwekukonana akaenda zvachose. Iyo yakavambwa mu Mekisiko uye yaive yakatsaurirwa kune cinematographic direction. Vhura 1959, panguva yekushanya kuSpain, akafa mutsaona yemotokari mukati Burgos.
Pakati pemabasa ake anozivikanwa ndeaya Kugara pamwe chete y Nhetembo hupenyu.
Hausi wega uri kunze kwangu.
Kusurukirwa kwangu kunoperekedza iwe.
Ndakadzinga, iwe usipo.
Ndiani pakati penyu mese ane kuda nyika?
Denga negungwa zvinotibatanidza.
Zvitsuwa uye makore ekukanganwa
Vanoparadzanisa iwe neni.
Chiedza changu chinokutorera husiku hwako here?
Husiku hwako hunodzima zvishuwo zvangu here?
Inzwi rako rinopinda murufu rwangu here?
Kufa kwangu kwaenda uye kunosvika kwauri?
Pamiromo yangu ndangariro.
Mumaziso ako tariro.
Handisi ndega ndisina imi.
Kusurukirwa kwako kunondiperekedza.
Wakanga uri wega sei mukati!
Pandakadongorera pamiromo yako
mugero mutsvuku weropa,
kwasviba nekusuruvara, yakanga ichinyura
kusvikira kumagumo emweya wako.
Apo kutsvoda kwangu kwakapinda,
kupisa kwaro nechiedza charo kwakapa
kune nyama yako yakashamisika.
Kubva ipapo migwagwa
izvo zvinotungamira kumweya wako
haudi kuti vasiwe.
Miseve mingani, hove, shiri,
mangani macresses nekutsvoda!
Rudo, unongozviratidza ...
pane zvaunotanga kubva kwandiri,
mweya usingaonekwe uri
kuti iwe unopamba mweya wangu
kusvibisa denga rakachena
Akadzivirirwa kubva kunotonhora
akavhara midzi yangu
bofu uye isina mashizha iyo isina kupfeka huma
iyo inokoshesa greenery netariro.
Zvakare akazvarwa muMalaga muna 1899, nemakore gumi nemashanu akasiya kudzidza kuchikoro chebhodhingi Madrid kwaienderana ne Juan Ramon Jimenez. Gare gare aive muDzimba dzeVadzidzi umo akasangana Dalí naGarcía Lorca. Akapedza rinenge gore ari muchipatara nekuda kwe chirwere chemapapu uye ipapo akatora mukana wekuverenga nekunyora. Kana uchipora, akadzokera kuMalaga kwaakatora chikamu mukuvambwa kwe Litoral magazini. Yakanga iri zvakare mupepeti weSouth yekudhinda, izvo zvakamuunzira mukurumbira wepasi rese. Akaendawo kuMexico akafira ikoko.
Basa rake rakakamurwa kuva nhanho nhatu yakatsaurirwa ku matambudziko munharaunda, zvisikwa uye kufungidzira. Mamwe mazita ari Matampu matanhatu epuzzle o Kuchema muropa.
Ratidza runyararo pamberi pako,
pano, ronda iri - hapana miganhu yevatorwa -,
nhasi ndiye akatendeka pachiyero chako chakatsiga.
Ronda nderako, iro muviri waro rakavhurika
Iyo ndeyako, ichiri yakaoma uye yakajeka. Huya ubate
buruka, uswedere pedyo. Unoona kwawakabva here
kupinda kuburikidza nemeso ako kuchikamu ichi
zvinopesana nehupenyu? Chii chawawana?
Chinhu chisiri chako zvachose?
Donhedza banga rako. Kanda pfungwa dzako.
Mukati mako izvo zvawakapa zvinokubereka,
Yakanga iri yako uye inongogara ichienderera chiito.
Ronda iri chapupu: hapana akafa.
ndipo pandiri ...
Ndinoziva kuti handife ndakaziva
Kwandiri kuenda ndinoziva ...
wakafa, handizive kuti, ndiri mupenyu,
Nhasi ndinoda kuzviona;
Mitumbi yedu yakasara
chiso nechiso, chisina chinhu.
Pakati pemiviri yedu,
Gomba rakadzika-dzika risingakanganwiki!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Manuel Altolaguirre naEmilio Prados. Vamwe vadetembi makumi maviri neshanu